FANTSONA IRAY VAKY TAMIN NY FANOTREHANA AKONDRO NO NITARIKA NY LOZA
Trano hazo iray etsy Antsahabe, akaikin’ny sekoly La Clairefontaine no nirehitra androany Alakamisy maraina 30 May 2013, tokony ho tamin’ny 9 ora mahery tany ho any. Sady fonenana moa ny ao ambon’ity trano ity no fantatra ihany koa fa fanotrehana akondro ny ao ambany. Haingana dia haingana ny fihitaran’ny afo amin’ny maha hazo ilay trano ka efa saika hifindra teo amin’ilay trano lehibe teo anilany. Tsy ela dia tonga ny mpamonjy haintrano ka voafehy ara-potoana ihany ny afo na dia efa kila tanteraka aza ilay trano hazo. Tsy nisy noraisina mihitsy ny entana sy ny zavatra rehetra tao an-trano, tsy nisy kosa anefa ny aina nafoy.
Araka ny fitantaran’ilay raim-pianakaviana tompon’ilay trano may dia ny zanany lahy 13 taona irery no tao an-trano tamin’io fotoana io. Ny tenany moa dia mpivarotra anana sy akondro ary mofo akondro tsy dia lavitra loatra ny trano fonenany. Raha ny voalazany dia nandeha naka rano ilay zaza tamin’ny fotoana nirehetan’ny trano ka tsy nisy olona tao an-trano. Mikasika ny antony nampirehetra io trano io indray dia fantatra fa nisy fantsona iray vaky, io fantsona io no voalaza fa mitondra ny entona mivoaka amin’ilay karazana lafaoro tao ambany rihana, izany dia ilaina amin’ny fanotrehana akondro. Io no nanaparitaka ny afo teny ivelany ary dia nitarika ny fahamaizan’ny trano tanteraka.
“Noheveriko fa tavela tao an-trano ilay zanako ka dia niezaka niditra ny trano aho na dia efa nirehitra aza ilay izy”, hoy ilay raim-pianakaviana. Vokatr’izany dia naratra teo amin’ny lohany sy nahitana ratra sy may maromaro ny tenan’ity lehilahy ity. Teo no ho eo ihany dia nalefan’ny mpamonjy haintrano teny amin’ny hopitaly ity raim-pianakaviana ity. Marihina fa dimy mianaka ireo fianakaviana nipetraka tao amin’ilay trano hazo.
Tato ho ato dia maro ireo trano hazo nirehitra. Vao tsy ela akory izay no nahamay ireo trano hazo maromaro fivarotam-boky eny Ambohijatovo. Mila fitandremana betsaka mihitsy ireny trano ireny satria ny hazo no anisan’ny zavatra mora mandray afo indrindra, ka pitik’afo kely iray monja dia mety hiteraka zava-doza mahatsiravina sy hamoizana ny nisasarana nandritra ny taona maro.
Fanadihadiana sy naka ny sary teny an-toerana : Nanouh